Maitiro ekudimbudzira hupenyu hwemakuki muMozilla Firefox | Linux Vakapindwa muropa
Cookies mafaera ane webhu saiti kana yaanogadzira mushure mekushanyira mapeji ewebhu anowanzo gadzira matambudziko mazhinji kune vashandisi. Iko kushandiswa kwemakuki kunovandudza kufamba asi zvakare kunovhura nzvimbo dzekuchengetedza uye kunowedzera kushanda kwewebhu browser.
Default, ese mabhurawuza ewebhu anotendera makuki kugara pakombuta yedu kwemakore Kunze kwekunge iye muvaki webhusaiti aratidza neimwe nzira. Tinogona kugadzirisa hupenyu hwese muMozilla Firefox uye kuita mafaera aya asipo kwemavhiki kana mazuva, nokudaro tichienzanisa pakati pechiitiko chekubhurawuza nekuita kwewebhu browser.
Kuti tigadzire izvi, tinofanira kutanga tavhura Mozilla Firefox. Ino nguva hatisi kuzoenda kune chero tab kana yekumisikidza hwindo asi isu tinonyora aya mazwi "nezve: gadzira" mune kero bar, pinda pinda uye runyorwa rwakasiyana zvinyorwa uye tsika zvichabuda.
Iye zvino tinofanirwa kuwana iyo inotevera yekupinda network.cookie.lifetime. Tichawana zvakati wandei zvakafanana. Tichaenda kumusuwo wakaenzana neizvi: «network.cookie.lifetimePolicy«. Tinofanira kushandura kukosha kwakaratidzwa mune iyi tambo, nekudaro kudzikamisa huwandu hwemazuva iyo cookie ichachengetwa neMozilla Firefox. Mune ino kesi tichazviitira iyo nhamba «3». Kukosha uku inozodzora kukosha kukuru kwecokie kubva pamakore kusvika pamazuva makumi mapfumbamwe. Iko kukosha kwakanyanya kupfuura kunogamuchirwa kune vazhinji.
Kana, kune rimwe divi, isu tichida chero kukosha kwehupenyu hwekuki, yedu Mozilla Firefox inoibvisa mushure memamwe mazuva, tinofanirwa kugadzirisa tambo "network.cookie.lifetime.days", zvichiratidza kukosha kwakaderera uye ipapo Mozilla Firefox ichadzima makuki atinawo mushure memazuva akaratidzirwa.
Kana tikatarisa zvishoma, ruzivo rwekubhurawuza ruchawedzera nekuti isu tichafanirwa kuisa mapassword, vashandisi, nezvimwe ... Asi kana tikatarisa zvakanyanya, hunyengeri uhu hunogona kunakidza kuchengetedza mashandiro uye chengetedzo yewebhusaiti yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekudimbudzira hupenyu hwemakuki muMozilla Firefox